खुर्सानी खानु हुन्छ ? खुर्सानीका फाईदा र बेफाइदा यी हुन्, जानी राख्नुहोस
काठमाडौँ । सामान्यतया चिल्लो र पिरो खानेकुरा नखान विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन् । चिल्लो तथा पिरो पेटमा समस्या आउने र अल्सर बनाउने साबधानी दर्शाउँदै आएका छन् । रातो खुर्सानीले पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्याबाट केही हदसम्म जोगाउँछ । पिरो खानेकुराले तौल घटाउनेदेखि शरिरलाई न्याने बनाउन र शरिर भित्रका रक्तनलीलाई सफा बनाउन खुर्सानी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
खुर्सानी खाँदाका फाइदा
हरेक खानेकुराको फाईदा र बेफाईदा हुन्छ । तपाई खुर्सानी खान सक्नुहुन्छ भन्दैमा धेरै परिणाममा खानु हुँदैन । निश्चित परिणाममा भन्दा बढी खानु हुँदैन । आवश्यकता भन्दा बढी खुर्सानी खाँदा ज्यान तात्ने, तालु तथा आखा पोल्ने र निद लाग्दैन ।
गर्मी हुने मानिसलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा हुन्छ । खुर्सानीले मुख सुख्खा हुने, मानसिक रुपमा तनाब बढाउने र शौच गर्न गाहा्रे हुने, पेट पोल्ने लगायतका समस्या हुन्छन् ।
ब्लड प्रेसर, कलेजोको रोग, डाबिटिज, किड्नी र मुटुको रोग छ भने खुर्सानी सेवन गर्दा साबधानी अपनाउनुपर्छ ।
खुट्टा गनाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी हटाउनुस गन्ध (६ टिप्स सहित)
यूएईमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा २ नेपालीको मृत्यु, २ जना गम्भीर घाइते